Ppsspp - Cross-Platform Open Source PSP Emulator | Ubunlog
Ppsspp - Emulator PSP Emulator Open Source Open Cross-Platform
Araka ny voalazan'ny lohatenin'ilay lahatsoratra, Androany dia hiresaka kely momba ny Ppsspp isika iza ianaon emulator loharano misokatra PSP, nahazo alalana tamin'ny GPL ary nosoratana tamin'ny C ++, izany hoe mandika ny torolàlana PSP CPU mivantana amin'ny kaody masinina x86, x64 ary ARM nohavaozina, amin'ny fampiasana ny recompiler JIT (dynarecs), izay ahafahanao mihazakazaka ny programa (sy ny lalao) amin'ny fitaovana tsy matanjaka.
PPSSPP dia rindrambaiko miampita sehatra ary azonao atao aza ny mihazakazaka ny lalao PSP amin'ny PC-nao na amin'ny Android amin'ny famahana HD feno.
Amin'ny tranga sasany, ny programa aza dia mety hampiakatra ny endriny mihitsy aza hialana fa tena manjavozavo izy ireo, satria novokarina ho an'ny efijery PSP voalohany.
Ny fandaharana azonao atao ny mihazakazaka ny rakitra PSP ISO amin'ny PC-nao, ary koa avy amin'ny kapila PSP, fa mila mamaritra ny toerana filalaovana ao anatin'ny PPSSPP ianao.
PPSSPP pAzonao atao aza ny mitahiry sy mamerina amin'ny laoniny ny firenena misy anao, amin'ny fotoana rehetra, ahafahana manohy amin'ny toerana nijanonanao, hamindrana ireo tahiry avy amin'ny tena PSP anao.
Alohan'ny hametrahana sy hampiasana ny programa dia tokony ho tadidinao fa ny mari-pamantarana rehetra dia fananan'ny tompony avy.
Ho an'ny fanabeazana sy ny fampandrosoana ihany ny emulator ary tsy azo ampiasaina hilalao lalao izay tsy tompon'ny lalàna.
Na dia mety mieritreritra aza ny maro, azoko atao ny milalao. Raharaha ny mitady fahazoan-dàlana. Eny, toy izany ny tranga console izay nipoitra indray, izay tsy manome ny anarana ary eo ambanin'ny hood dia misy emulator loharano misokatra ao am-pony, izay PSX.
Amin'izany izy ireo dia afaka mahatsapa izay azo tanterahina amin'ny emulator loharano misokatra.
1 Ahoana ny fametrahana ny emulator PPSSPP amin'ny Ubuntu 18.10 sy ny derivatives?
2 Ahoana ny fanesorana ny emulator PPSSPP amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ahoana ny fametrahana ny emulator PPSSPP amin'ny Ubuntu 18.10 sy ny derivatives?
Mametraka ny PPSSPP ary milalao ny lalao PSP amin'ny Ubuntu 18.10, Ubuntu 18.04 LTS ary ireo derivatives avy amin'ireo. Afaka mametraka amin'ny fomba roa samy hafa isika.
Ny voalohany amin'izy ireo sy ny fomban-drazana dia miaraka amin'ny fanampian'ny repository, izay ahafahantsika mahazo ny emulator amin'ny endriny farany ary afaka mahazo vaovao farany avy aminy, raha mbola ampiana ny repository.
Mba hampidirana ity tahiry ity amin'ny rafitray dia tsy maintsy soratinay izao baiko manaraka izao:
Ankehitriny dia tsy maintsy havaozintsika ny lisitry ny fonosana sy ny tahiry:
Ary farany azontsika apetraka amin'ny:
Azon'izy ireo ampiasaina ity baiko manaraka ity hametrahana ny kinova SDL amin'ilay programa;
Ny fomba hafa hametrahana ity emulator ity amin'ny rafitray dia miaraka amin'ny fanampian'ny fonosana Flatpak.. Noho izany dia tsy maintsy manana ny fanohanan'ny rafitra hametraka fampiharana an'io karazana io ao amin'ny rafitray isika.
Raha vantany vao azontsika antoka fa afaka mametraka ireo rindranasa ireo isika dia tsy maintsy manokatra terminal ary manao izao baiko manaraka izao:
Vantany vao vita izany dia tsy maintsy miandry ny famoahana ilay fonosana sy fametrahana azy ireo izy ireo.
Amin'ny faran'ny fametrahana dia tsy mila mitady ny mpandefa fotsiny ao anaty menio fampiharana izy ireo mba hahafahany mihazakazaka ny emulator.
Raha tsy mahita ilay mpandefa dia alefaso fotsiny ilay emulator avy amin'ny terminal:
Ankehitriny ny iray amin'ireo lesoka dia ny tsy fananan'izy ireo fampandrenesana kinova vaovao, noho izany hanavao ny programa, raha misy kinova vaovao, dia tsy maintsy manatanteraka ny baiko izy ireo:
Ahoana ny fanesorana ny emulator PPSSPP amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Farany, Ho an'ireo izay te-hanaisotra ity emulator ity amin'ny rafitr'izy ireo dia tsy maintsy manokatra terminal izy ireo ary ao anatin'izany no manatanteraka ireto baiko manaraka ireto araka ny fomba fametrahana azy ireo.
Raha nametraka tamina toerana fitahirizana izy ireo dia tsy maintsy manoratra:
ankehitriny Ho an'ireo izay nametraka tao Flatpak dia afaka mampiasa ny iray amin'ireo baiko ireo izy ireo hanesorana ny emulator:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Ppsspp - Emulator PSP Emulator Open Source Open Cross-Platform
Lisitry ny rindranasa, ny fomba hanafainganana azy ao amin'ny Ubuntu 18.04 / 18.10
Linux ao amin'ny DeX miaraka amin'ny Ubuntu, fanambarana Samsung ho an'ireo mpamorona mandroso